Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo soo agaasimay Kulan deg deg ah oo ku saabsan Abaaraha ka jira dalka – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray October 26, 2021
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo soo agaasimay Kulan deg deg ah oo ku saabsan Abaaraha ka jira dalka
Muqdisho, Oktoobar 26, 2021- Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo agaasimay kulan fogaan arag ah oo ku saabsan abaaraha ka jira dalka, gaar ahaan deegaannada Jubbaland.
Kulanka ayaa wadajir u bogaadiyey dadaallada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed, gudo iyo dibadba, iyagoo ku baaqay in la sii dardar geliyo, lana xoojiyo sidii loo badbaadin lahaa dadkeenna ku dhibaateysan deegaannada ay ku habsadeen abaaruhu.
Inta uu socday kulanku, Madaxda ayaa ka dhageystay guddigii Wasiirrada ahaa ee gurmadka geeyey iyo Wasiirka Gargaarka Jubbaland warbixin ku saabsan saameynta abaaruhu ay ku yeesheen Jubbaland oo ka mid ah deegaannada ugu il daran saameynta Abaaraha ka jira dalkeenna.
Gabagabadii, Madaxda ayaa adkeeyey baahida degdegga ah ee loo qabo in la xoojiyo dadaallada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan, iyagoona isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Rooble oo cambaareeyey falkii ay argagixisadu ku gubeen raashin iyo hanti ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed
Qormada XigtaKu Xiga Kulan howleedka Tiirka Arrimaha Bulshada XFS oo ka dhacay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha